Ku hel iMac Pro qiimo jaban $ 1.000 | Waxaan ka socdaa mac
Laga soo bilaabo bartamihii Diseembar, iMac Pro ayaa laga heli karaa suuqa, inkasta oo cutubyadii ugu horreeyay ay bilaabeen inay gaaraan dadka isticmaala dhowr maalmood ka hor dhammaadka sanadka. Ahaanshaha badeecad hadda suuqa timid, way adag tahay in la helo badeecadan, iyada oo xoogaa qiimo dhimis ah, gaar ahaan dibedda Mareykanka.
Dalka Mareykanka, waxay umuuqataa in helitaanka iMac Pro qaabkiisa aasaasiga ah uu xoogaa ka fududyahay sida ay umuuqato. Maalmo ka hor waxaan kugu wargalinay dalabkii BestBuy, dalab noo ogolaaday inaan iibsanno iMac Pro oo ay ku baxayso $ 250 iyo ku dhowaad $ 500 haddii aan dooranay inaan soo iibsanno nooc carwo ah. Hadda waa silsiladda Micro Center oo bixiya qiimo dhimis heer sare ah $ 1.000.
Micro Center, iibiyaha idman ee Apple, ayaa bixiya qiime dhimistaan moodel aasaasi ah oo Apple ay suuqa geliso $ 4.999 oo lagu daray canshuuraha Mareykanka iyo 5.499 euro waa Spain, oo qeexitaanadooda ay yihiin kuwa soo socda:
5-inji retina 27k bandhigay.
32 GB oo DDR4 RAM ah
Sawirada AMD Radeon Pro Vega 56 8 GB HBM2
Akhristaha kaarka SDXC
10 GB Xiriirinta Ethernet, Bluetooth 4.2 iyo Wifi 802.11.ac
Nidaamka hawlgalka MacOS High Sierra
Maskaxda ku hay in dalabkan laga heli karo oo keliya dukaamada jirka ee Micro Center, laguma heli karo khadka tooska ah ee websaydhka shirkaddan. Sidii la filaayay, shirkaddu waxay iibisay tiro cutubyo kooban ah, markaa haddii aad ku nooshahay Mareykanka oo aad ujeedo ka leedahay inaad ka faa'iideysato dalab ah inaad iibsato iMac Pro, waa inaadan laba jeer ka fikirin.
Micro Center waxay ku leedahay dukaamo jireed California, Colorado, Georgia, Illinois, Kansas, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Texas, iyo Virginia. Dalabkani wuxuu ku kooban yahay hal unug qofkiiba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Soo qaado iMac Pro oo leh $ 1.000 off